सिन्धुलीमा घट्यो दुखद: घटना, १४ प्रहरीको अवस्था गम्भीर — Imandarmedia.com
सिन्धुलीमा घट्यो दुखद: घटना, १४ प्रहरीको अवस्था गम्भीर
सिन्धुली । सिन्धुलीमा अप्रिय घटना घट्दा, १४ प्रहरीको अवस्था गम्भीर बनेको छ। बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय ३९ वर्षीय विजय मुक्तानको मृत्युका विषयलाई लिएर आफन्त र स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए।
मङ्गलबार कमलामाई नगरपालिका–२ निवासी विजयलाई निबुवाटारमा प्रदेश ३–०१–०३६ प १४१९ नम्बरको बोलेरोले ठक्कर दिएको थियो। घाइते भएका विजयलाई सिन्धुली अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक विमलराज कडेलले जानकारी दिए।
प्रहरीले मृतकका आफन्तलाई छलफलमा आउन आग्रह गरेकामा छलफलमा नआई बिपी राजमार्गअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–२ पीपलभञ्ज्याङमा राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि घटनास्थलमा गएको प्रहरी टोलीलाई स्थानीयले आक्रमण गरेको उनले बताए।
स्थानीयको आक्रमणबाट १४ जना प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एक जनालाई प्रहरी अस्पताल काठमाडौँमा पठाइएको र ११ जना उपचारपछि घर पर्किएका छन् भने दुई जनाको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिए।
स्थानीयको ढुङ्गा, सिसाका बोतल प्रहारबाट वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार विजयकुमार यादव, प्रहरी जवान जोसना श्रेष्ठ, लीला खत्री, कर्णबहादुर मुग्राती, घनश्याम चौधरी, रमेश लामा र गोपाल थारु घाइते रहेका छन।
यस्तै प्रहरी हबल्दार भोला राउत, निजामुदी मिह, प्रहरी जवान विमला श्रेष्ठ, सञ्जित श्रेष्ठ, भूपेन्द्र रावत, रामनारायण राउत र ईश्वरकुमार बास्तोला घाइते भएका छन्।
घाइतेमध्ये जोसना श्रेष्ठको उपचारका लागि प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ पठाइएको र अरु १० जना डिस्चार्ज भएको प्रहरी उपरीक्षक कडेलले जानकारी दिए।
अस्पतालमा भूपेन्द्र रावत, रामनारायण राउत र ईश्वरकुमार बास्तोलाको उपचार भइरहेको र उनीहरूको अवस्था सामान्य नै रहेकाले केही समयपछि घर पठाइएको जानकारी दिए।
घाइतेको टाउको, कुम र खुट्टामा सिसाका बोतलले काटेको चोट लागेको छ। प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरीको संयमताले घटनामा मानवीय क्षति भने हुन पाएन।
त्यस्तै, सलमान खानका लागि सरकारसँग दुई हजार सुरक्षाकर्मी माग गरीएको छ।भारतीय अभिनेता सलमान खान आउँदो जेठ १४ गते एउटा कन्सर्टका लागि काठमाडौं आउँदैछन् । एक निजी कम्पनीले निकै ठूलो धनराशी खर्चेर सलमानलाई नेपाल ल्याउन लागेको हो ।
आयोजक ओडीसी इन्टरनेटमेन्टका अनुसार दशरथ रंगशालामा हुने कन्सर्टका लागि कुल १८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सलमान एक्लैले ३ करोड भारु (४ करोड ८० लाख रुपैयाँ) पारिश्रमिक लिनेछन् ।
सलमानसँग करिब १०० जनाको टोली नेपाल आउँदैछ । उनीहरुमध्ये नौ जना सेलिब्रिटी हुन् भने अन्य ब्याक डान्सर र वाद्यवाधकहरु हुन् । सलमानको टोलीमा ज्याकलिन फर्नान्डिस, सोनाक्षी सिन्हा, प्रभू देवा, गुरु रान्धवा, सहीद मन्जेरकर, मनिष पल, कमाल खान र अर्का एकजना छन् ।
सोनाक्षीले ५२ लाख र ज्याकलिनले ४० लाख भारु पारिश्रमिक लिएका छन् । अन्य कलाकारहरुको १०–१५ लाखको हाराहारी छ । कुल मिलाएर ४ करोड ८० लाख भारु कलाकारको पारिश्रमिकमा खर्च हुने छ ।सबै कलाकारसँग बेग्लाबेग्लै सम्झौता गरेर उनीहरुको खातामा पैसा गइसकेको ओडीसी इन्टरनेटमेन्टका प्रमुख सीमान्त गुरुङले जानकारी दिए ।
यसअघि २०७४ सालमा नै यो कन्सर्ट गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला सबै कलाकारहरुलाई पारिश्रमिक बैंकबाट पठाइसकिएको थियो, तर अन्तिम समयमा विप्लव माओवादीको थ्रेटका कारण कार्यक्रम स्थगित भयो ।
लामो समयसम्म कन्सर्ट हुन नसकेपछि ओडीसीले सलमानसँग अग्रिम भुक्तानी भएको पैसा फिर्ताका लागि ताकेता गर्यो । तर सलमानले फिर्ता गर्न चाहेनन् । बरु आफू नेपाल आउन इच्छुक रहेको भन्दै उपयुक्त समयमा कन्सर्ट गर्न सुझाए ।
त्यसैबमोजिम पहिले भुक्तानी भएको पैसामा केही थप गरेर अहिले उनलाई ल्याउन लागिएको गुरुङले बताए ।उनले भने, ‘हामीले चार वर्षअगाडि नै साढे दुई करोड आईसीभन्दा बढी पेमेन्ट गरिसकेका थियौं । अहिले थपिएका केही कलाकारका लागि थप पैसा पठाउनुपर्यो । अरु पहिल्यै भुक्तानी गरिएको पैसा हो ।
कलाकारहरुको पारिश्रमिक बाहेक उनीहरुको आउजाउ र नेपालमा बस्ने–खाने खर्च पनि आयोजकले व्यहोर्नुपर्ने छ । यस्तै स्टेज तयारी, प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापकीय कामहरुमा गरी कुल १८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको गुरुङले बताए। कार्यक्रम हुने दिनभन्दा एक हप्ताअघि देखि टिमका सदस्यहरु आउन थाल्ने र सलमान भने अघिल्लो दिन आउने उनको भनाइ छ।
अघिल्लोपटक कार्यक्रम स्थगित हुँदा ओडीसीलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो। त्यसबेला आफूहरुलाई करिब ४ करोड घाटा लागेको गुरुङले बताए। कार्यक्रमका लागि केही हजार टिकट पनि विक्री गरिएको थियो। तर, कार्यक्रम हुन नसकेपछि ती सबै टिकट फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
२ हजार सुरक्षाकर्मी माग: सलमानको कन्सर्टका लागि आयोजकले सरकारसँग कडा सुरक्षाको माग गरेको छ। अहिलेसम्म कतैबाट प्रत्यक्ष ‘थ्रेट’ नआएको भए पनि धेरै संख्यामा दर्शकहरु उपस्थित हुन सक्ने अनुमान गर्दै आयोजकले आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।गुरुङका अनुसार १५ सयदेखि २ हजार प्रहरी कन्सर्टस्थलमा परिचालन गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ।
हामीले १५ सयदेखि २ हजार मागेका छौं, अब उहाँहरु के निर्णय गर्नुहुन्छ थाहा छैन, गुरुङले भने ।सीडीओ कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोजकले मागेको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका हिसाबले सुरक्षाको बन्दोबस्त गरिनेछ। यस विषयमा प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकिएको जिप्रका काठमाडौं स्रोतले बतायो।
सरकारले दिने सुरक्षासँगै आफ्नो तर्फबाट पनि ७–८ सय जनाको ‘सेक्यूरिटी’ र २–३ सय जना स्वयम्सेवक परिचालन गरिने गुरुङको भनाइ छ। प्रहरीले खटाउने जनशक्तिलाई खाजा खर्च कम्पनीले उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए। अघिल्लोपटक विप्लव माओवादीले कार्यक्रम रोक्न थ्रेट दिएको थियो। यसपाली अहिलेसम्म सो पार्टीका तर्फबाट कुनै प्रत्यक्ष चेतावनी आएको छैन । तर, पार्टीनिकट जनसांस्कृतिक संगठनका नेताले यो कार्यक्रम गर्न नदिइने बताएका छन् ।
नेपाली कलाकार को–को ? सलमान खानको कन्सर्टमा नेपाली कलाकारहरुलाई पनि समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म कलाकारको टुंगो लागि नसकेको गुरुङ बताउँछन् ।‘नेपाली कलाकार त राख्नैपर्छ । हामी नेपालका २–३ जना पुरुष र २–३ जना महिला कलाकारहरुलाई कन्सर्टमा सामेल गराउँछौं । नेपाली कलाकारले एक–डेढ घन्टाको प्रस्तुति दिनुहुनेछ,’ गुरुङले भने ।नेपाली कलाकारलाई दिइने पारिश्रमिकबारे उनले बताउन चाहेनन् ।
बिक्ला टिकट ? सलमानको कन्सर्टका लागि टिकटको मूल्य निकै महंगो छ। न्यूनतम पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँको टिकट राखिएको हो । आयोजकले टिकट विक्रीबाट मात्रै ३०–३५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। ३० हजार जतिले टिकट काटेर हेर्नुहुुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो, त्यसो भयो भने ३०–३५ करोड टिकटबाट उठ्छ र ८–१० करोड रुपैयाँ प्रयोजकहरुबाट उठाउछौं, उनले भने ।उनले अघिल्लोपटक ठूलो घाटा लागेको भन्दै सधै घाटा खाएर चल्न नसकिने बताए।